Guddoomiyaha madasha xisbiyada oo safiirka Mareykanka kala hadlay arrimaha xasaasiga ah ee Soomaaliya – Maanta Online
Guddoomiyaha madasha xisbiyada Shariif Sheekh Axmed ahna madaxweynihii hore ee Dowladdii KMG ahayd ayaa markii ugu horeysay kulan gaar ah la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya wadanka Soomaaliya Ambassador Donald Yamamota, iyagoona ka wadahadlay xaaladda dalka.
Kulanka oo ka dhacay xarunta safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay xerada Xalane, Shariif Sheekh Axmed guddoomiyaha madasha xisbiyada waxa uu safiirka Mareykanka uga warbixiyay aragtiyaha ay ka qabaan arrimaha siyaasadda dalka iyo doorashooyinka dadweyne ee la filayo inay dhacaan sanadada 2010-ka ilaa 2021-ka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaa kale oo safiirka hor dhigay cabashooyin ay ka muujinayaan faragelinta ciidamada dowladda Itoobiya ka wadaan gudaha dalka, isagoona Ambassador Yamamota ka dalbaday inuu wax ka qabto arrintaasi.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu sheegay in guddoomiyaha madasha xisbiyada siyaasadda Shariif Sheekh Axmed ay ka wadahadleen sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, inaan muddo kordhin loo sameynin xukuumadda dowladda Federaalka ee hadda jirta.
Dhinaca kale Guddoomiye Shariif ayaa safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya waxa uu u gudbiyay eedeymo ka dhan ah madaxda dowladda federaalka oo uu sheegay inay dalka ku maamuleyso qaab aan ku habooneyn dadka Soomaalida ah sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo ku dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Muqdisho.
← AMISOM pledges to secure 2020/2021 polls in Somalia
Adan Barre Ducale: “Xildhibaanimada Baarlamaanka Kenya haddii aan ku weynayo xitaa kama tanaasulayo Soomaalinimada” →
Hay’adda gargaarka caalamiga ah ee Islamic Relief Worldwide oo in ka badan 22,000-kun neef ka qeybisay Gobolka Banaadir, Puntland, Somaliland, Sh/dhexe iyo Sh/hoose
Dagaal ka dhashay dahab laga helay gobolka Sanaag oo faraha ka sii baxaya
Ciidamo Itoobiyaan ah oo gaaray Dhuusamareeb xilli xaalad xasaasi ah jirto